Kuyini ukuvukela uMbuso umbala?
Ukuze minyaka eyishumi edlule kule yezombangazwe ekuphileni kwansuku zonke kunezimpande kuyinto efana revolution umbala. Kuyini lokhu? Kanjani leli fomu bekhalaza? Yini kubonakaliswa? Ubani nokuxhasa ke, silungiselela futhi usenza? Asithathe yezinto zokuqala kuqala.
Namuhla, ngaphansi linemibhikisho umbala kuthathwe ukusho nezibhelu serial kanye nemibhikisho labantu ezweni, okwenziwa ngokusekelwa angaphandle NGO. Ngokuvamile izenzo ezinjalo kuholele ushintsho wezombusazwe, kodwa ngaphandle ukubandakanyeka lempi. Ngesikhathi esifanayo kukhona ushintsho, futhi iqembu elibusayo.
Ukude kungenzeka praobrazom umbala linemibhikisho ngokuthi le Icebo lika Iranian ka-1953, ngesikhathi ngenxa isimo ogunyaziwe iye ugumbuqelwe UNdunankulu Mohammed Mossadegh. Ngaleso sikhathi samanje akekho ukuvumelana, iziphi izenzakalo akunakubangelwa isihloko kulesi sihloko, uhlobo ubuchwepheshe zezombusazwe. Ngakho, ilungelo elisemthethweni ukuba ezinemibala Uthole: "Bulldozer Revolution" (eYugoslavia, 2000), "Rose Revolution" (Georgia, 2003), "Orange Revolution" (Ukraine, 2004), i- "Tulip Revolution" (Kyrgyzstan, 2005 ). Abanye abacwaningi ozama ukubheka nangaphakathi futhi ashiwo esigabeni esifanayo kanye "uhlobo lwembali enephunga elimnandi Revolution" (Lisbon, 1974), okwaphumela waqaphela Icebo lika nokuhlinza ubushiqela undlovukayiphikiswa salandelwa uhlelo ovulekile-yeningi. Kodwa isibonelo akukakabi uthathwe revolution umbala, ngoba Icebo lika kwakuhlelwa lempi isiPutukezi. Kodwa abadlali main nezinye kubhekwe imibhikisho - abantu empini, futhi kwasekuqaleni - esebenzayo intsha ukuphikiswa ngokomqondo.
Umbala Revolution: Izimbangela
1. ejulile crisis yangaphakathi (ezomnotho nezombusazwe) isimo esisha esizimele, lapho lezizinto zenzeka khona.
2. unrequited isifiso ukubangisana kwemibuso emikhulu futhi lonke amabutho ukuthi banesithakazelo kwesigaba umphumela futhi ekuthuthukiseni izithakazelo zayo.
3. Izinkinga emkhakheni kwezomnotho, ikakhulukazi emnothweni kwezenhlalo, okubenze bafinyelela destabilization isimo: nobuphofu ukugudluka enkulu yomphakathi, ukuntuleka esezingeni eliphakathi nendawo.
Ngaphezu kwalokho, njengoba imfuneko revolution umbala egqanyisiwe inkinga ezifana ukwenqena kahulumeni ukuba ubambisane ukuphikiswa, indiva wakhe, futhi ngezinye izikhathi ukucindezelwa. Kungukufanekisa zingamela usongo inguquko kuleli zwe njengoba isifo womuntu, ogama izimpawu zibonisa ukuthi okuthile emzimbeni akuyona ukuze. Nokho, uma lezi izimpawu bamshaya yimuphi ukunakwa, futhi amandla lokubusa we "Ukugula" akusho ukwelapha, kodwa kunalokho, ngeke ukushayela ngisho ezijulile, kuphi nokuthuthukisa intuthuko. Ngesinye isikhathi neprekrasny "isifo" luyoqala, kodwa ngisho nalapho kuyoba nzima kakhulu ukuyeka.
Kodwa umbala linemibhikisho kungaba hhayi kuphela ngenxa yokuthi ngeke konke ukuze ngaphakathi isimo. Kungenzeka kudingeka umuntu, hhayi kuphela labo niyifeza, kodwa futhi kulabo zihlelekile, "nokwaba". Ngokuvamile, lezi abathintekayo basekelwe zezombusazwe kanye nezimali umbhikisho esekude - abawona ekhona emigwaqweni nasezigcawini ngokwayo, kodwa ngokucophelela ukuqapha imibiko nezenzo abadlali ushaye uquqaba.
revolution Color: isakhiwo
Kunoma yikuphi ukuvukelwa kwemibuso, ikakhulukazi umbala, kukhona isakhiwo. Evamile, kungashiwo imelelwa iphiramidi ezintathu-tiered. Phezulu zitholakala umbhikisho 'abaxhasi' - simo abashisekeli uquqaba wamavukelambuso. Kuyinto abantu, namaqembu amaningi abantu abenza yokufundisa, isiqondiso, ngezimali kanye ukudalwa kwemisebenzi yoMnyango Imininingwane ukwesekwa yombhikisho. Ngqo phansi ungalokothi usebenza, naphezu siwuvumele usithonye, kodwa kuphela ngokusebenzisa abaxhumanisi, ebavumela ukuba "abaxhasi", ukulondoloza umuntu okufanelekelayo emehlweni omphakathi jikelele.
uqimba Ephakathi bakha abagqugquzeli ngqo Icebo lika. Umbala revolution ngokuvamile kuba iqembu orientation intsha esebenzayo sika pro-Western. Kulesi sigaba iwe uhlangothi, emkhakheni womphakathi ubudlelwane ze ochwepheshe (izintatheli, odokotela bengqondo professional), ezisiza ukwakha isizinda, isimo izinguquko of uquqaba ukuthi kwadingeka umbono ongemuhle neze uhulumeni okhona. Eyesibili isigaba abagqugquzeli - a "Umbukiso" (osopolitiki abafuna ngobugagu esikhethekile engasenathonya).
Esigabeni sesitsatfu, isihlanganisi ephansi futhi eminingi kakhulu - abavamile, abantu, okuyinto ebalulekile ukudalwa imibhikisho ezigcawini edolobheni nasemigwaqweni. Ngesikhathi esifanayo ezinye zazo zingabantu Abavukeli kuphela ngenxa yezizathu yamaSoviet, kuyilapho abanye osukwini ngomumo nobusuku ngo yimuphi sezulu ukuya imibuthano ezinamazwi nezibhengezo Adalberto imali eningi.
Bernar Arno: Biography, isimo
Ukubulawa esikoleni, "eColumbine" 20 Apreli 1999 - Eric Harris, Dylan Klibold, uhlu efile futhi elimele
Maka Victory e yiMpi Enkulu Yobuzwe
Yan Yanovsky: Biography, izimpumelelo izinkumbulo
Lapho kwakhiwa eBabele? Umlando eBabele
Gazebo Modern futhi stylish kusukela kubha
Xhuma i-router kwikhompyutha ephathekayo noma ikhompyutha. Imiyalo yokufaka nokulungisa i-router
"Inkukhu noGwayi kuso": iresiphi zakudala namanothi ukupheka
Yini kungaba isizathu ukuthi izinga lokushisa kugcinwa 37 ngesonto?
Indlela yokwenza Pinwheel lephepha bebodwa?
"Emahlathini nezintaba": nabalingisi izici movie
Petrova Olga: Biography, lokusungula, uyise abadumile, indodakazi abanamakhono
Uninterruptible segezi. Ongenaziphazamiso ugesi for the okokubilisa igesi ngamalahle
Roman Babaev, omunye abaphathi engcono football Russian
Igumbi Oeander ekhula ophahleni
Yomiselela Laptop CPU namandla kakhulu: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo